A kọwara Docs Google | Martech Zone
Google Docs abụwo ngọzi n'ezie maka ụlọ ọrụ m na-arụ ọrụ. Anyị bụ ụlọ ọrụ na-eto eto nke 5 (naanị goro anyị nke ise!) Ma anyị enweghị sava ma ọ bụ ngwa ọrụ netwọkụ ịkekọrịta. N'ikwu eziokwu, anyị achọghị otu.
Mgbe m bidoro, a na-ebufe ederede site na email wee bụrụ ihe mgbagwoju anya! M gbara ọkụ Google Docs wee bido ichekwa dọkụmentị… mgbe ahụ anyị kpaliri na Ngwa Google ma ugbu a, anyị edozichara akwụkwọ niile anyị nwere na ya. Anyị nwere ndị otu na Dallas, San Jose, na India na-arụ ọrụ site na Basecamp na akwụkwọ ndị a kwa ụbọchị ma ọ dị mma!
Site na ahịa, echere m na Google Docs ga-abụ nnukwu akụ maka ndị na - ede kọọpịkọ na ndị editọ iji rụọ ọrụ mgbe ị na - ewu ọdịnaya maka onye ahịa. Ebe ọ bụ na ha abụọ nwere ike nbanye n'otu oge, mee ka ndezi, ikori, wdg… yiri ka nke zuru oke na ngwaọrụ.
Achọpụtara m Nkịtị na-akọrọ vidiyo ọzọ gbasara Google docs:
Ọ bụrụ na ị debanyereghị aha, ọ bara uru! Maka obere azụmaahịa nwere ndị ọrụ ole na ole ma ọ bụ ndị ọrụ na-anọghị na etiti, ọ bụ nnukwu usoro.
Ihe Omumu na Usoro Niile Anyị
Basecamp bụ ebe nchekwa ọrụ na-enweghị isi ebe anyị na-ekwurịta okwu ma weghachite ọrụ ọhụụ. Google docs na-arụkọ ọrụ ọnụ ma na-ekwusi ike mgbanwe akụkọ ihe mere eme, yabụ anyị na-eji ya karịa Basecamp.
N'etiti ha abụọ, anyị ka chọrọ usoro njikwa ọrụ, yabụ anyị mwekota na ulo oru mmepe ka m na-enyocha Uchechukwu Jira. Ọ dị ka nnukwu sistemụ, aga m esochi ma mee ka ị mata etu o si arụ ọrụ!
Tags: Auditing ikandepụta ndepụtaMarTech Blog Redio Gosinhazi ọkwakwụọ ụgwọ kwa Pịappcppc ahịaSlidernchịkọta mmadụ mgbasa ozivideo mkpanaka
Jenụwarị 9, 2008 na 7:26 PM
Akwa post, Doug. M na-agwa otu n'ime ndị enyi m okwu ụbọchị ọzọ, otu nwoke na-elekọta obere ụlọ ahịa. Ya na onye edemede na-arụ ọrụ na kilomita 150, na mgbe ụfọdụ ya na ndị mmadụ na-emekọrịta ihe dị ka Denver. Kedu ka ha si eme ka ọ rụọ ọrụ? Akwụkwọ Google na Ngwa Google. Iji weghachite ugboro ugboro REM, nke a nwere ike ịbụ njedebe nke ngwanrọ dị ka anyị si mara ya, na m ga-eche na ọ dị mma.
Jenụwarị 10, 2008 na 10:19 PM
Ekwenyere m kpamkpam, mana m ga-aga n'ihu wee kwuo na ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka ụlọ ọrụ na-ajụ ase yana yana nnukwu ụlọ ọrụ.
M na-elekarị MS Office anya dị ka ngwa "dị mkpa", mana otu onye ọrụ ibe m gbalịrị ime ka m kwenye na ị nwere ike ịme na-enweghị Office site na iji Google Docs na ndị ọrụ Office na-akwụghị ụgwọ (eg Excel Viewer). Arụmụka ya bụ na maka ịgụ akwụkwọ ị na-eji ndị na-ekiri ya (nlele dị mfe site na ịpị abụọ), mana maka ịmepụta akwụkwọ ọhụrụ ị na-eji Google Docs. Enwere m obi abụọ n'ihi na m bụ nnukwu onye ọrụ Exel, mana m azụrụla kọmpụta ọhụrụ (Vista, yikes!) Wee chee na m ga-anwale ụzọ ya. O were ụfọdụ ike ịmara m, mana ugbu a ekwenyesiri m ike na ọ bụ eziokwu n'ihi na enweela m ike "ịlanarị" ihe dịka otu ọnwa na enweghị nsogbu ọ bụla.
Mmetụta dị mma dị mma bụ na m ghọtara ugboro ole edere akwụkwọ iji kesaa. Ugbu a, anọ m ebe isi na-ewe m iwe mgbe ndị mmadụ na-eziga akwụkwọ ntanetị Excel maka ebumnuche mmekọrịta site na email. Ọ bụ otú na-adịghị amịpụta n'ihi na ị maghị ihe bụ ọhụrụ version. Otu nwere ike na-arụ ụka na ihe nkesa Sharepoint na-edozi nsogbu ndị ahụ, mana ọ bụghị mgbe ị nwere ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ / kwụsịrị nke na-enweghị ike ijikọ na sava Sharepoint gị.
Ntughari a siri ike maka ndị ọrụ na gburugburu ụlọ ọrụ, maka ebumnuche dị iche iche, mana ka m na-ahụ ọtụtụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-eji ngwa ngwa weebụ.
Dị ka ị kọwara ya, “Ọ bụ njedebe nke ngwanrọ ka anyị si mara ya, na m ..” 🙂
Anyị na-agba obere ụlọ ọrụ nwere otu nha na onyinye Zoho dabara anyị nke ọma. Anyị na-achọta http://writer.zoho.com bụrụ onye dịkarịrị nso na MSWORD maara ihe.
Google Docs na-amasịkwa m, mana Basecamp anaghị amasị m. Ọ masịrị m Adaba. Ngwaọrụ a dị oke mma, ebe ị nwere ike ịmekọrịta na ọtụtụ mmadụ dịka ịchọrọ ma ha niile ga-enweta akaụntụ n'efu.
Feb 23, 2009 na 11:55 PM
Ana m eme nyocha banyere etu SMB si eji ngwa google na ihe bụ oghere ndị ahụ. Biko dee ihe mere na ichota JIRA.